Tag: fitiliana feno | Martech Zone
Tag: fanandramana feno
Torohevitra sy fomba fanao tsara indrindra amin'ny fitsapana ny fampidirana Salesforce
Alakamisy Janoary 19, 2017 Zoma Janoary 20, 2017 Amar Kukreja
Ny fitsapana Salesforce dia hanampy anao hanamarina ireo fampidirana Salesforce namboarina sy fampiasa miaraka amin'ireo rindranasa orinasa hafa. Ny fitsapana tsara dia manarona ny maody Salesforce rehetra avy amin'ny kaonty ka hatrany amin'ny fitarihana, hatrany amin'ny fotoana mety alohan'ny tatitra, ary hatrany amin'ny fampielezan-kevitra ka hatrany amin'ny fifandraisana. Toy ny tranga amin'ny fitsapana rehetra, misy fomba tsara (mahomby sy mahomby) hanaovana fitsapana Salesforce ary fomba ratsy. Ka inona izany ny fitsapana Salesforce izay fanao tsara? Ampiasao ny fitaovana fitsapana marina - fitsapana Salesforce